Izindaba - Abathengisi besayensi baxoxa ngezinzuzo zocwaningo lwegama elingukhiye le-FBA
ILas Vegas, ngoJuni 9, 2021 (Global News Agency) -Umthengisi Wezesayensi eLas Vegas, eNevada usanda kudingida amagama angukhiye nezinzuzo zocwaningo lwamagama asemqoka lokugcwaliseka komthengisi we-Amazon. Le nkampani isanda kumemezela ukwethulwa kwethuluzi labo elingukhiye le-Amazon FBA, elenzelwe abantu abathengisa ku-Amazon.
Omele le nkampani, uRobert MacDonald, uthe: “Ucwaningo lwamagama asemqoka lubalulekile kunoma iyiphi imboni, noma ngabe lidayisa imikhiqizo noma lune-website nje efundisayo. Ukwenza abantu bavakashele le webhusayithi, kusetshenziswa amagama asemqoka, futhi Ukuze wazi ukuthi yimaphi amagama angukhiye afanelekile, kudingeka ucwaningo. ”
UMacDonald uthe ithuluzi lenkampani lizosesha i-Amazon ngesikhathi sangempela futhi lihlale linikeza amagama angukhiye akamuva futhi afanele kakhulu. Uthe ithuluzi lenkampani linikeza imininingwane yamagama angukhiye enembe kunazo zonke futhi limahhala kubathengisi be-FBA. Wengeze ukuthi ucwaningo lwamagama asemqoka, ikakhulukazi embonini yokuncintisana kakhulu njengokuthengisa ku-Amazon, kubalulekile ukuthi abathengisi bahlale phambili komncintiswano.
UMacDonald uthe: “Ukwanda okuncane kwezinga lokuguqulwa komuntu kungasho umehluko omkhulu phakathi kokubalwa njengenombolo yokuqala kuGoogle ngalelo gama eliyisihluthulelo noma ukudideka ngokuxuba.” “Noma yini kulo mkhakha. Wonke umuntu kumele azi ukuthi kufanele abekwe ezingeni emakhasini ambalwa okuqala. Empeleni, zikala kangcono ekhasini lokuqala, futhi yindlela amagama angukhiye enza ngayo lokhu. ”
UMacDonald uthe noma iyiphi inkampani engatholakali ekhasini lokuqala noma ezimbili zenjini yokusesha cishe ngeke itholwe ukuseshwa okuningi. Ucwaningo lukhombisile ukuthi abathengi abaningi bapheqa kuphela amakhasi amabili kuya kwamathathu e-Google lapho befuna umkhiqizo noma insizakalo ethile, ngakho-ke kubalulekile ukukala phezulu ngegama elingukhiye elithile. IMacDonald yengeze ukuthi ithuluzi lenkampani lamahhala lamagama angukhiye lingasiza izinkampani ukuthi zifinyelele kulezi zinombolo ezifiselekayo.
"Noma ngubani oke wahlanganyela kunoma yiluphi uhlobo lokumaketha online uzokwazi ukuthi ukufinyelela amakhasi ambalwa okuqala kubalulekile," engeza. “Sakhele leli thuluzi kubathengisi be-Amazon ukubasiza ukulinganisa imikhiqizo ethile abayithengisayo. Amagama angukhiye afanele azodlala indima ebalulekile ekufinyeleleni lezo zikhundla eziphezulu ezifiselekayo nokusiza laba bathengisi ukufinyelela izethameli abazifunayo. umphumela. ”
UMacDonald uthe noma ngubani onemibuzo noma ofuna eminye imininingwane angavakashela inkampani online ukuze afunde ngokuwohloka okuphelele kwethuluzi nokuthi lisebenza kanjani. Wengeze ukuthi leli thuluzi linikeza abathengisi izinguquko ezincane, kepha lezi zinguquko zingaveza imiphumela emikhulu e-Amazon.
Uthe leli thuluzi lenzelwe ukubonisa amagama angukhiye e-Amazon kuphela, ngakho-ke lisebenza ngokuphelele nabathengisi be-Amazon. Njengamanye amathuluzi, ithuluzi loMthengisi weSayensi alibonisi uhlu olukhulu lokuhambisana kwamagama njengamanye amathuluzi, kepha libonisa kuphela amagama asemqoka athile kubathengi be-Amazon, ngakho-ke abathengisi bangakhetha kalula abakudingayo ukusebenzisa amagama angukhiye.
UMacDonald uthe empeleni, leli thuluzi linikeza abathengisi indlela yokukhulisa ibhizinisi labo ngokwandisa ukuthengisa, ngoba akuwona wonke umuntu ozobekwa ohlwini lwawo wonke amagama angukhiye afanele. Ngenxa yalokhu, iMacDonald yathi abathengisi kumele babe nethuluzi eliyisihluthulelo elenzelwe ukusebenza embonini yabo ethile, futhi basebenzise ithuluzi ukukhetha amagama angukhiye abenza bakwazi ukukhulisa ibhizinisi labo.
Labo abanentshisekelo bangafunda isimemezelo sangaphambilini senkampani esizeni sayo sezindaba se-Press Advantage noma bavakashele iwebhusayithi yayo esemthethweni ukuze ufunde kabanzi ngethuluzi layo elingukhiye lokucwaninga elenzelwe ngqo abathengisi be-Amazon. Inkampani ingathintwa futhi ngekhasi labo elisemthethweni le-Facebook noma ngqo ngocingo noma nge-imeyili. Labo abanentshisekelo bangathola imininingwane yokuxhumana kanye nayo yonke imininingwane yabo yesayithi yezokuxhumana kwiwebhusayithi yabo esemthethweni.
Ngeminye imininingwane mayelana noMthengisi weSayensi, sicela uxhumane nenkampani lapha: Umthengisi WezesayensiRobert MacDonaldsupport@scientificseller.comPO Box 29502 # 84699Las Vegas, NV 89126
I-Instagram "ayisekho isicelo sokwabelana ngezithombe", ophethe u-Adam Mosseri uvumile ukuthi i-Facebook Inc (NASDAQ: FB) isebenzisane neTikTok ne-Alphabet Inc (NASDAQ: GOOG) esiqeshaneni sevidiyo esifushane. (Nasdaq: GOOGL) Kwisiqeshana sevidiyo esifushane ku-YouTube, i-Financial Times ivumile ukuthi ibikile. Okwenzekile: UMosseri ukwamukele ukubaluleka okwandayo kwevidiyo ekushayeleni amapulatifomu aku-inthanethi futhi wafuna ukunaka kakhulu abezindaba. Abahlaziyi bazwakalise ukukhathazeka ngokushintshwa kwenjini yokukhulisa imali ebaluleke kakhulu kuFacebook, engabeka i-Instagram engozini
Amahlaya athi “Ngicabanga ukuthi kufanele uhambe” nethi “Angikaze” abuye futhi alungiselele “Master of the Uni” kaKevin Smith kanye ne- “Beast Sexy” exakile
Le nkampani ithe ngoLwesine ukuthi iFacebook Inc isiqalile ukuxwayisa abanye abasebenzisi bayo ukuthi kungenzeka babone "okuqukethwe okweqisayo" ezinkundleni zokuxhumana. Isithombe-skrini esabiwe ku-Twitter sikhombisa isaziso sibuza ukuthi "Ingabe ukhathazekile ngokuthi othile omaziyo uba yingozi?" Omunye uxwayisa abasebenzisi ukuthi "Kungenzeka ukuthi uvezwe kokuqukethwe okuyingozi okuyingozi kamuva nje." Inethiwekhi yezokuxhumana enkulu kunazo zonke emhlabeni Sekuyisikhathi eside ingaphansi kwengcindezi evela kubomthetho kanye nezinhlangano ezilwela amalungelo abantu ukulwa nobushoshovu ezisekelweni zayo, kufaka phakathi ukubamba iqhaza emkhankasweni wasekhaya waseMelika odlameni lwaseCapitol ngoJanuwari 6, lapho amaqembu asekela owayenguMongameli uDonald Trump ezama ukuyeka i-US Congress Fakazela ukuthi uJoe Biden walunqoba ukhetho lukazwelonke lwangoNovemba.
Ngokusho kombiko omusha ovela ku-GamesBeat, umakhi we "Star Wars: Squadron" u-EA Motive uqala kabusha uchungechunge oludumile lwezindaba eziqanjiwe zesayensi "Dead Space".
Isitudiyo somdlalo esizinze eLos Angeles i-Singularity 6 sesithole imali eningi njengoba siyanda futhi silungiselela ukwethula umdlalo waso wokuqala. Ukuqala kutshele abakwaTechCrunch ukuthi baqongelele amaRandi ayizigidi ezingama-30 kumjikelezo we-Series B oholwa yiFunPlus Ventures, ngokubamba iqhaza kuka-Andreessen Horowitz (a16z), LVP, Transcend, Anthos Capital, noMitch Lasky. Lesi situdiyo manje sesidalule imali engaba yizigidi ezingama- $ 49, okuyimali enkulu, kepha kukhombisa ukuthi bangaki abatshalizimali abanethemba lokuhlangana emidlalweni yesikhulumi semidlalo ngemuva kwesilo esikhulu sikaRoblox i-IPO.
Ipulatifomu yokwabelana ngesithombe ihlela ukwenqabela ukusetshenziswa kolimi noma izithombe ezifekethisa noma ezilulaza izinhlobo ezithile zomzimba.
Lesi sihlabani esisezingeni eliphezulu sasifuna ukuthola ilungelo lango “Lwesihlanu” kuWarner Bros. futhi sasola lesi situdiyo ngokubambezeleka ngokweqile nokungaphathwa kahle. UWarner uthe inkinga ikwiqhwa.
Izifundo zokuphatha ibhizinisi eziphezulu, izifundo ezi-7 ezikhethekile ezibandakanya ukuphathwa, ukumaketha kwedijithali nezinsiza zabasebenzi, njll. Ngokushesha nangempumelelo kuqedwe ezinyangeni eziyi-8, okukuvumela ukuthi uthole imfashini yaseBrithani.
IWarner Bros. Studio eLeavesden, e-UK (WBSL) yandise izindawo zayo ngokwethula imisindo emisha emithathu kanye nesiteji sokukhiqiza esibonakalayo, iV Stage. I-HBO's "Game of Thrones" prequel "Dragon House" iqinisekiswe njengomkhiqizo wokuqala ukusebenzisa lesi sikhungo esisha. ngaphandle kwe[...]
Umqondisi uchaze isigcawu esinokuphikisana esilingisa lesi sihlabani somlingisi esivela kwifilimu yakhe eqokiwe ye-2019 Best Picture ethi "Once upon a Time in Hollywood".
Ngemuva kwezinyanga zokuvinjelwa okunamandla, i-propaganda blitz, nokuqongelela uchungechunge lwamafilimu wokushisekela izwe, okuqukethwe yi-TV nomculo, iqembu lamaKhomanisi laseChina ligcine ligubha iminyaka engu-100 lasungulwa ngoLwesine. Iqukethe izinkulumo zepolitiki, izikhumbuzo zabantu abaningi ezihlelwe ngokucophelela eTiananmen Square, kanye ne-chauvinism […]
I-HKMA ihlela izifundo ze-8 MBA namanyuvesi adumile we-5 futhi isebenza ngasikhathi sinye eHong Kong, inikezela ngezinto ezihlukile, kufaka phakathi ukuphathwa kwebhizinisi, ukumaketha, ukuphathwa kwezimali kanye nabasebenzi. Iminyaka engu-1.5 yokuqedela, masisha ubhalisele izinkulumo zezifundo zamahhala.
Ibhayisikobho entsha kaChris Pratt igxile ezimpini zesikhathi esizayo nabaphikisi bangaphandle, kepha okumhehayo yisici somuntu. Ku "War of Tomorrow," uPratt udlala owake waba yisosha uDan Forester, ohambela ku-2051 ukusindisa ikusasa lendodakazi yakhe futhi ahlanganyele empini ehluliwe phakathi kwabantu nabahlaseli abomele igazi. "Uma ukwazi ukubeka umdlalo othi 'Lena impilo enhle' ngokusebenzisa…
Inkosi yokusakazwa kwevidiyo ikugweme kancane esikhathini esedlule, kepha imboni ithuthuka ngokushesha.
Akukho ukuwohloka, isiqinisekiso esigcwele! Nikeza isiqinisekiso sosuku lokuqala! Umshwalense uqala ukusebenza ekuvikeleni oku-1 [i-Global Super Power].
Lesi sinyathelo sikhombisa ukuthi ukushoda kwe-chip kuzothinta kakhulu imboni ngemuva kwekota yesibili. Abanye abaphathi bemboni yezimoto bathe lesi sikhathi sizobeka isikhathi esibucayi kakhulu sezinkinga zokuhlinzeka.
Amaphupho yisikhala lapho ungadlala khona futhi uzwe amaphupho eMedia Molecule nomphakathi wayo. Lesi futhi isikhala sokwakha amaphupho akho, noma ngabe imidlalo, ubuciko, ama-movie, umculo noma yini ephakathi.
Kubuyekezwe izimvume nohlelo. Le nkampani ithe la manethiwekhi amabili e-multicast e-EW Scripps ethulwe namuhla, i-TrueReal neDefy TV, aqothulwe emakhaya angama-92% aseMelika. Ngaphezu kokufakwa kwenethiwekhi, uScripps uphinde wamemezela imininingwane yohlelo. I-Defy TV izogxila kwabesilisa abaneminyaka engama-25 kuya kwengama-54 futhi inikeze […]